Moments leh saaxiibo 59
Sidee ayay dhibaatooyinkaas oo dhan wax uga qabteen dadaalladooda oo ay u muuqdaan kuwo aan suurtagal ahayn xallinta inta lagu jiro wakeeyn saacadaha waa in lagu xalliyaa inta lagu jiro hurdada ama isla markiiba soo kicinta?
Si loo xalliyo dhibaatada, qolalka maskaxda ee maskaxda waa in ay noqdaan kuwo aan loo baahnayn. Marka ay jiraan waxyeello ama caqabad ku ah qolalka maskaxda ee maskaxda, habka xalinta wixii dhibaatooyin ah ee la tixgelinayo ayaa caqabad ku ah ama joojiya. Sida ugu dhakhsaha badan dhibaatooyinka iyo xayiraaddu way baaba'ayaan, dhibaatada waa la xalliyaa.
Maskaxda iyo maskaxdu waa arrimo la xiriira dhibaatada, shaqaduna waa nidaam maskaxeed. Dhibaatada waxaa laga yaabaa inay ka welwelsan tahay natiijo muuqaal ah, sida qalabka loo isticmaalo iyo habka dhismaha loo raaco dhisida buundada si ay u yeeshaan miisaankii ugu yaraa iyo xoogga weyn; ama dhibaatadu waxay noqon kartaa mawduuc aan la taaban karin, sida, sida loo maleynayo in laga soocay iyo sida loola xidhiidha aqoonta?
Dhibaatada jireed waxaa lagu sameeyaa maskaxda; laakiin marka la tixgeliyo xajmiga, midabka, miisaanka, dareenka ayaa loo yaqaannaa ciyaaro wuxuuna caawiyaa maskaxda xallinta dhibaatada. Xalka dhibaatada ama qayb ka mid ah dhibaatada aan la taaban karin waa nidaam maskaxeed oo aan dareemeynin wax welwel ah iyo meesha ficillada dareenadu ay faragalinayaan ama ka hortagi lahaayeen maskaxda inay xalliyaan dhibaatada. Maskaxdu waa meesha lagu kulmo maskaxda iyo dareenka, iyo dhibaatooyinka ku saabsan natiijooyinka jidhka ama maskaxda ah maskaxda iyo dareemada si fiican u wada shaqeeyaan maskaxda. Laakiin marka maskaxdu ay ka shaqeyso dhibaatooyinka maadooyinka abstract, dareemada maaha mid welwel ah; Si kastaba ha noqotee, walxaha dunida dibadda waxaa lagu muujiyaa dareennada qolalka maskaxda ee maskaxda ku yaala, halkaasna waxaa dhib ama maskaxda ku haya shaqadooda. Sida ugu dhakhsaha badan ee maskaxdu u keeni karto farshaxyadooda inay ku filnaadaan dhibaatada iyada oo la tixgelinayo, dib-u-dhaca ama fekerada aan ka walaacsanayn ayaa laga reebay qolalka maskaxda maskaxda, iyo xalka dhibaatada waa la arkay.
Saacadaha soo foorjada dareenka waa furan yahay, indho-la'aanta iyo dhawaaqyada iyo riyooyinka ka soo baxa adduunka dibadda ayaa si aan caadi aheyn u socdaalaya qolalka maskaxda ee maskaxda ah waxayna farageliyaan shaqada maskaxda. Marka dareenka la xiro aduunyada dibedda, sida ay u yihiin xilliga hurdada, maskaxdu way ka yar tahay shaqadeeda. Laakiin markaa hurdadu badanaa waxay maskaxda ka saartaa dareenka waxayna badiyaa maskaxda ka ilaalisaa in ay dib u soo celiso aqoontii uu ka qabtay markii ay taabatay dareenka. Marka maskaxdu aanay u tagin dhibaato, dhibaatadaas waxaa la qaadaa haddii ay ka baxdo dareenka inta lagu seexdo, xalkiisana waa la soo celiyaa oo la xidhiidha dareenka ku soo kicinta.
Mid ka mid ah hurdada ayaa xalliyay dhibaatooyin ah oo aan lagu xallin karin dawlad soo kicinta taasoo macnaheedu yahay in maskaxdiisa uu ku seexanayo waxa uu awoodi waayey inuu sameeyo marka uu soo jeedo. Haddii uu ku riyoodo jawaabta, mawduucaan, dabcan, wuxuu noqonayaa wax ku saabsan waxyaabaha la taaban karo. Xaaladdan oo kale, maskaxda, ma aha inay iska tagto dhibaatada, waxay ku riyootay habka fikradda ah ee ay ahayd arrin walaac leh markay soo jeedo; geeddi-socodka sababaynta wuxuu ahaa uun laga wareejiyay dareenka tooska ah ee dareenka dareenka ee gudaha. Haddii mawduucu uusan ka walwalsanayn waxyaabaha la taaban karo, jawaabta lama ridi doono, inkastoo hurdada laga yaabo in jawaabtu ay timaaddo isla markiiba. Si kastaba ha noqotee, ma aha wax caadi ah jawaabaha dhibaatooyinka lagu riyoodo ama ay yimaadaan inta lagu seexdo.
Jawaabaha dhibaatooyinka waxay u muuqdaan inay yimaadaan inta hurdadu socoto, laakiin jawaabaha sida caadiga ah waxay yimaadaan inta lagu jiro waqtiyada marka maskaxda ay mar kale la xiriirto dareenka tooska ah, ama isla markiiba ka dib markay toosaan. Jawaabaha dhibaatooyinka dabeecadda aan la taaban karin laguma riyoon karo, sababtoo ah dareemada waxaa loo isticmaalaa riyo iyo dareemada waxay faragalinayaan ama ka hortagi lahaayeen feker la'aanta. Haddii maskaxda hurdada oo aan riyooneyn in la xalliyo dhibaatada, jawaabtaasna waa la ogyahay marka uu ninka soo jeedo, markaa maskaxda ayaa u muuqata mid toos ah isla marka ugu dhaqsaha badan jawaabta ay soo gaartay.
Maskaxdu ma seexan hurdada, xitaa inkastoo aysan jirin riyo ama xusuusin waxqabad maskaxeed. Hase yeeshee hawlaha maskaxda ee hurdada, iyo inta aan la riyoon, inta badan lama ogaan karo xaalad soo jiidashada, sababtoo ah buundada waxaa lagu dhisay meelo maskaxeed iyo xaaladaha waking ama dareenka riyadii; weli mid ayaa laga yaabaa inuu helo natiijooyinka hawlahaas oo ah qaab isdhexgal ah oo wax looga qabanayo gobolka waking-ka. Biriijka ku meel gaarka ah ee u dhexeeya maskaxda iyo xaaladaha xasaasiga ah waxaa sameeya mid ka mid ah qofka hurdada ku haya dhibaatada uu maskaxdiisa ku soo bandhigay markii uu soo jeedo. Haddii uu maskaxdiisa maskaxdiisu ku filan tahay dadaalka uu ku wajahayo xallinta dhibaatada marka uu soo jeedo, dadaalkiisuna wuu sii wadi doonaa hurdo, hurdadu waa la xiiri doonaa oo wuu soo jeedi doonaa oo uu maareyn doonaa xalka, haddii uu gaadhay inta lagu jiro hurdada.